ILumina neDraco: 2 Izindawo Ezilula Nezilula Ezihlukile Zedeskithophu | Kusuka kuLinux
ILumina neDraco: Izindawo ezi-2 ezilula nezilula ze-Desktop
Uma kukhulunywa ngeLinux, kunezinto eziningi ezibangela ngokwehlukana intshiseko nentshiseko phakathi kwabasebenzisi beLinux. Lezi zinto zivame ukufaka zombili izindlela ze- Izindawo zeDeskithophu (DE) njenge Abaphathi bamawindi (WM). Kungakho-ke, ngezikhathi ezithile, sivame ukuphawula ngezinye zazo. Futhi namuhla ukuphenduka kwalaba 2 abalandelayo: ULumina noDraco.
Kumele uqaphele, ngaphambi kokungena ngokugcwele kubo, ukuthi ULumina noDraco wakhe 2 Izindawo ezilula nezingasindi zedeskithophu (DE), eyokuqala yakhiwa ngokuphelele kusukela ekuqaleni, kanti eyesibili imfoloko yokuqala.
Futhi, kuhle ukukhunjulwa kulabo bathandi be Izindawo zeDeskithophu (DE), okushiwo yi-DE yethu yangaphambilini: UZiqu-zintathu noMoksha. Okubuyekezwe njenge:
"Ukutholwa (imfoloko) yezindawo ezindala zedeskithophu ezenziwe zanamuhla ukuze ziqhubeke nokusebenza kwezinye ze-GNU / Linux Distros, ikakhulukazi ukuze zisebenzise amandla azo okubhekiswe kuwo, maqondana nokusetshenziswa kwemithombo ephansi (i-RAM, i-CPU)".
Isizathu sokuthi kungani, ngemuva kokuqeda lokhu okuthunyelwe, sincoma ukuthi ufunde okulandelayo okuthunyelwe okuhlobene:
Izindawo ezihlukile zedeskithophu azisekelwa yi-DEBIAN 10
Futhi ezinye zihlobene ngqo ne: I-GNOME, KDE Plasma, I-XFCE, I-Cinnamon, MATE, I-LXDE y I-LXQT.
1 ILumina neDraco: Izindawo zeDeskithophu (DE)
1.1 Yini uLumina DE?
1.2 Izici zeLumina DE
1.3 Yini iDraco DE?
1.4 Izici zeDraco DE
ILumina neDraco: Izindawo zeDeskithophu (DE)
Yini uLumina DE?
Ngokusho kwe- Iwebhusayithi esemthethweni yeLumina DE, okufanayo:
"Imvelo yeDeskithophu engasindi yakhelwe kusuka phansi kuze kube nokuhamba okuncane, okunikeza uhlelo lwakho ukusebenza okuhle kakhulu. Futhi yakhelwe ukugeleza ngaphandle komthungo phakathi kwemisebenzi yekhompyutha, ngenkathi ihlinzeka ngezinsiza eziningi ezakhelwe iphakethe elilodwa lokufaka, elilula.".
Izici zeLumina DE
Abathuthukisi bayo bathi ivelele futhi / noma yehlukile kwabanye Izindawo zeDeskithophu (DE) ngu:
Yakhelwe ukusebenza kangcono nge-Distro yamanje I-Trident y I-TrueOS (Kususiwe), yize kusebenza ngqo i-BSD Community Distros, kukonke. Kodwa-ke, iLumina DE nayo ingafakwa kalula kunoma yiluphi uhlelo olusebenzayo, kufaka phakathi ukusatshalaliswa kweLinux.
Akudingi ukusetshenziswa kwanoma yiziphi izinhlaka ezisetshenziswa kakhulu zedeskithophu (DBUS, policykit, consolekit, systemd, HALD, phakathi kwabanye).
Akuhlanganisiwe nanoma yiziphi izinhlelo zokusebenza "zomsebenzisi wokugcina" (iziphequluli zewebhu, amaklayenti we-imeyili, isoftware ye-multimedia, ama-office suites, njll.). Izinsiza kuphela ezilethwa yiLumina ngokuzenzakalela yilezo ezibhalelwe ngqo iphrojekthi futhi ngokuvamile zenzelwe ukusebenza kwangemuva, okungukuthi, kohlobo lwezinsiza. Isibonelo, insiza enkulu kunazo zonke imenenja yefayela.
Thatha ifayela elilula elisuselwa kumbhalo ukusungula okuzenzakalelayo kohlelo kubasebenzisi abasha. Lokhu kuvumela abathengisi bedeskithophu ukusetha kalula okuzenzakalelayo kwesistimu / isikhombimsebenzisi ukuze basebenze kuphela kumsebenzisi wokugcina.
Nikeza ukwakheka kwesixhumi esibonakalayo okususelwa kuma-plugins. Okuvumela umsebenzisi ukuthi enze ideskithophu ibe lula / inzima njengoba befuna (ngokwesizathu), ngokumane ukhethe ukuthi imaphi ama-plugins azosebenza kudeskithophu / kuphaneli yawo.
Umsebenzi njengesixhumi esibonakalayo senqubo ejwayelekile, okungukuthi, ukwazi ukusebenza kalula kunoma yiluphi uhlobo / usayizi wedivayisi noma wesikrini.
Ngeminye imininingwane, vakashela izixhumanisi ezilandelayo: Isixhumanisi se-1, Isixhumanisi se-2 y Isixhumanisi se-3.
Yini iDraco DE?
Ngokusho kwe- Iwebhusayithi esemthethweni yeDraco DE, okufanayo:
"Imvelo elula futhi engasindi yedeskithophu. Yize incane, ifaka ukuhlanganiswa kwe-XDG, ukuhlanganiswa kwe-freedesktop nezinsizakalo, ukugcina amandla nokuphathwa kwamandla, ideskithophu, amadeshobhodi, ukusekelwa kokuqapha okuningi, nokunye okuningi. IDraco ayifaki izicelo zomsebenzisi. IDraco yenzelwe iSlackware Linux futhi isebenze kuyo, kepha futhi iyahambisana neRHEL / CentOS / Fedora nenye iLinux. IDraco imfoloko yaseLumina".
Izici zeDraco DE
Ngokungafani Lumina DE, iwebhusayithi ye UDraco DE ayinikezi imininingwane eyengeziwe ngezici zayo eziyinhloko, kodwa khumbula lokho UDraco DE Kuyinto a imfoloko yeLumina DENgakho-ke, akufanele kube khona umehluko omkhulu. Noma kunjalo, singakhipha futhi sigqamise okulandelayo:
Mayelana nokuphathwa kwesitoreji: Iyakwazi ukubonisa isitoreji esitholakalayo kanye namadivayisi we-optical kutreyi yesistimu, nokunikezela ukufakwa okuzenzakalelayo (nokuvula) kokugcina / okokusebenza kwamadivayisi lapho kufakwa, nokudlala okuzenzakalelayo kweCD / DVD.
Mayelana nokuphathwa kwamandla: Iyakwazi ukusebenzisa insizakalo ye-screensaver org.freedesktop.screenSaver, insiza org.freedesktop.PowerManagement futhi inikeze ngokuzenzakalela isimo sokumiswa ukulala.
Ngokuphathelene nokwakheka kwayo, ihlukaniswe izingxenye ezilandelayo: libDraco, start-draco, draco-izilungiselelo, izilungiselelo ze-draco-x11, org.dracolinux.Desktop, org.dracolinux.Power, org.dracolinux.Powerd, org.dracolinux.Storage, org.dracolinux.XDG ne-xdg-open .
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" Kulokhu Izindawo ezintsha ze-Desktop ze-2 (DE) bhalisiwe ku-Blog, ebizwa «Lumina y Draco», ezibonakala ikakhulu ngokuba lula nokukhanya, nokuqokomisa ukuthi eyesibili imfoloko yokuqala; zithakazelisa kakhulu futhi ziyasiza, ngakho konke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » ILumina neDraco: Izindawo ezi-2 ezilula nezilula ze-Desktop
I-KDE Plasma 5.20 ifika nokuthuthuka okuhlukahlukene ezingxenyeni zayo nokuningi
Impi ehlulwayo, imidlalo yama-Epic idela abasebenzisi bayo be-iOS